Wabiga Shabelle oo ku fatahay xaafadaha magaalada Beledweyne & barakac socda +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wabiga Shabelle oo ku fatahay xaafadaha magaalada Beledweyne & barakac socda +(SAWIRRO)
Wabiga Shabelle oo ku fatahay xaafadaha magaalada Beledweyne & barakac socda +(SAWIRRO)
Beledweyne (Halqaran.com) – Warar ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya, in wabiga Shabelle uu saacadihii la soo dhaafay uu fatahaad ka sameeyay xaafado ka tirsan magaalada.
Wararka ayaa sheegaya in dadka qaar ay durba magaalada ka barakaceen.
Wabiga oo aad u buux dhaafiyay, kadib roob ka da’ay Magaalada ayaa waxaa uu Biyo dhigay xaafado ka tirsan magalada Beledweyne, iyada oo ay jireen dadaalo ay fatahaada looga hortagayo oo ay wadeen Guddiga gurmadka iyo Maamulka Gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in ay jiraan dad dano gaar ah oo dadka barakicinaya, waxaana uu uga digay ha’adaha samafalka inay gurmad gaarsiiyaan dadka barakacay,hay’adii fulisana tallaabo ay ka qaadi doonaan.
Tukriga oo Digniin u dirtay Midwoga Yurub, kaddib markii…